पूर्बप्रवासी नेपालीहरुलाई पनि राष्ट्रसेबामा सहभागिताको अबसर दिनुपर्ने आजको आबस्यकता « Sansar News
पूर्बप्रवासी नेपालीहरुलाई पनि राष्ट्रसेबामा सहभागिताको अबसर दिनुपर्ने आजको आबस्यकता
४ आश्विन २०७४, बुधबार ०६:१६
मातृभूमिबाट पनि अपहेलित र कार्यरत देशबाट पनि अमर्यादित बनी दुईढुंगाको बीचको तरुल जस्तै बनेर बाचीरहेका छन प्रवासी नेपालीहरु
४ असोज, काठमाडौँ । अब स्थानीय तहको चुनाब सम्पन्न पश्चात आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चर्चाहुन लागि रहेको छ । बजारमा आगामी चुनाबमा को ? कहाँ ? आदि इत्यादि बहस र छलफल सुरु भैसकेको अबस्था छ । हरेक दलका संंभावित उम्मेदवारका नामहरु मिडियाले प्रचार ग़रीरहेका छन । संंभावित उम्मेदवारहरु पनि आ– आफ्नो ढँगले आफ्नो पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन । राजनितिक दलहरु भित्र पनि उम्मेदवार चयन सम्बन्धी चर्चा र छलफल शुरू भैसकेको अबस्था छ । आगामी चुनावमा राष्ट्रिय सोच बोकेका , आंफैमा भिजन र मिसन भएका, योग्य ,सक्षम , सृजनसिल ब्यक्तित्वहरुलाई राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्नु पर्छ भन्नेकुरामा कसैको दुइमत सायद हुँदैन होला । यहाँ समावेशी भन्दै गर्दा सामान्यतः सम्पुर्ण जात, जाती , भाषा, भाषी , धर्म , लिङ्ग , समुदाय आदि बुझिन्छ । तर यतिले मात्रै समाबेसीता पूर्ण हुँदैन । यहाँ मैंले एउटा क़ुरा थप्न चाहेको छू अर्थात राज्य र राजनैतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहेको छु ।
भनिन्छ मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाई मुलुक बाहिर छन । उनीहरुको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिएको छ । मुलुककको हरेक परिबर्तनमा प्रवासी नेपालिहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । तर आज तिनै प्रवासी नेपालीहरु कार्यरत देसमा अपमानित छन । अमर्यादित छन । उनीहरुले आजपनि प्रवासी अधिकार बाट बंचित छन । तर राज्यले कहिल्यै यिनीहरुको बारेमा चर्चा गरेको छैन ।
ति हुन प्रवासी नेपाली । प्रवासी भन्नाले सामान्यरत रूपले वा सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनीहरु जिबिकापार्जनको लागि मातृभुमि छोडेर सीमानापारि परभूमि गएका प्रवासीएका नेपालीहरु हुन । यिनी प्रवासी नेपालिहरुको संख्या पनि ठुलो छ । भनिन्छ मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाई मुलुक बाहिर छन । उनीहरुको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिएको छ । मुलुककको हरेक परिबर्तनमा प्रवासी नेपालिहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । तर आज तिनै प्रवासी नेपालीहरु कार्यरत देसमा अपमानित छन । अमर्यादित छन । उनीहरुले आजपनि प्रवासी अधिकार बाट बंचित छन । तर राज्यले कहिल्यै यिनीहरुको बारेमा चर्चा गरेको छैन । यिनीहरुको हक, हितको बारेमा बोलेको छैन । अहिले सम्म कुनै नीति बनाएको छैन ।
परिवर्तनकै लागि ,नेपाल र नेपालीकै लागि अंशकालीन र पुर्णकालिन रुपमा रहेर समेत सेबामुलक भाबनाले काम पनि गरिरहेका छन । प्रवासी नेपालीहरु सँग यथेष्ट ज्ञान प्राप्त भएको छ । उनिहरुसँग सिप र तालिम छ । उनीहरु लगनसिल , सीधासाधा र उच्च भाबना बोकेका इमान्दार हुन्छन । उनीहरु जिम्मेबार बहन गर्न खप्पीस हुन्छन । उनिहरुसङ्ग विभिन्न मुलुकको बिकास र परिबर्तन देखेको जानेको भोगेको आधारमा अनुभबका खानी नै बनेका छन । आज धेरै प्रवासी नेपालीहरु दे फर्कि सकेका छन ।
यसरी मातृभूमिबाट पनि अपहेलित र कार्यरत देशबाट पनि अमर्यादित बनी दुईढुंगाको बीचको तरुल जस्तै बनेर बाचीरहेका छन प्रवासी नेपालीहरु । यहां सम्पन्न मुलुकहरुमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेहरू , राम्रो कामको अबसर प्राप्त गरी वा खोजीको लागि जानेहरू , डिभी चिट्ठा परेर आफ्नो देसकै नागरिकता त्यागेर जानेहरू एक थरिका नेपालीहरु छन । भने अर्काथरी खाड़ी मुलुक लगायतका देशहरूमा पसीना बगाउने लाखौं नेपाली श्रमिकहरु छन । उनीहरुको पनि छुटैखाले समस्या , दुःख , बेदना रहेका छन । अर्को भनेको भारत प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको अबस्था दुःख बेदना झनै करुणादायी छ । संख्यात्मक रूपले हेर्दा सबै भन्दा ठुलो संख्या यहीँ रहेको छ। भारत प्रवासका प्रवासी नेपालिहरुको त लेखाजोखा नै छैन । उनीहरुको कुनै अभिलेख पनि छैनन । खुला सिमानाका कारण बिना अभिलेखीकरण आवात जावत दिनचर्या नै बनेको छ। कहाँ कति गए ? कति छन ?कतिमरे ?कति मारिए ? राज्यलाई कुनै मतलब नै छैन । तर जो जहाँ रहेपनी , जति दुःख कष्ट पाएपनी मातृभुमि प्रति सबैको बिभिन्न रूपले योगदान रहेको छ । भारत प्रवासमा सीमा जोडीएको र नजिक भएको हैसियतले अझ बढ़ी योगदान देखिन्छ । यहाँका प्रवासी नेपालीहरु हरेक परिबर्तनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेका छन । आर्थिक , भौतिक , नैतिक सहयोग पुरयाएका छन । परिवर्तनकै लागि ,नेपाल र नेपालीकै लागि अंशकालीन र पुर्णकालिन रुपमा रहेर समेत सेबामुलक भाबनाले काम पनि गरिरहेका छन । प्रवासी नेपालीहरु सँग यथेष्ट ज्ञान प्राप्त भएको छ । उनिहरुसँग सिप र तालिम छ । उनीहरु लगनसिल , सीधासाधा र उच्च भाबना बोकेका इमान्दार हुन्छन । उनीहरु जिम्मेबार बहन गर्न खप्पीस हुन्छन । उनिहरुसङ्ग विभिन्न मुलुकको बिकास र परिबर्तन देखेको जानेको भोगेको आधारमा अनुभबका खानी नै बनेका छन । आज धेरै प्रवासी नेपालीहरु दे फर्कि सकेका छन । उनीहरुले उचीत जिम्मा नपाएको , लाहुरेको रूपले हेर्ने गरेको गुनासो हुंदै आएको छ । आज प्रवासी नेपालीहरु राष्ट्र सेबाका जुनसुकै निकायको जिम्मा दीएपनी कुसल पुर्वक हाँकन सक्ने क्षमता राखेका छन । उनिहरुसँग रहेको भएको योग्यता , क्षमता र दक्षता र प्रवासमा बसेर मुलुकप्रति पु¥याएको योगदान लाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई हरेक ठाउँमा अबसर दिनुपर्छ , देश बनाउने र देश को सेबा गर्ने बिभिन्न निकायमा जिम्मा दिनुपर्छ । मुलुकका राजनैतिक दलहरुले यस बिषयलाई गम्भीर बनेर निर्णय लिन पनि उत्तिकै आबश्यक छ ।
अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाबामा प्रत्यक्ष वा मनोनीत जुनसुकै प्रक्रिया बाट भएपनि पूर्ब प्रवासिहरुलाई सहभागी बनाईनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मुलुकको समुन्नत बिकासमा वास्तवममै समावेशि सहभागिता रहेको हुनेछ । यस बिषयमा सबै ठाउँबाट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।